Dhac Nuuc cusub ah oo ka bilowday Muqdisho iyo shacabka oo cabsi badan lasoo daristay | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhac Nuuc cusub ah oo ka bilowday Muqdisho iyo shacabka oo cabsi...
Dhac Nuuc cusub ah oo ka bilowday Muqdisho iyo shacabka oo cabsi badan lasoo daristay
Magaalada Muqdisho waxaa mudooyinkii ugu dambeeyay kusoo badanayay burcada hubeesan ee dadka shacabka ah dhaca u geesta, waxaana kooxahan burcada ah hada lasoo baxeen xirfado cusub ay dadka ku dhacaan.
Dhalinyaro burcad ah oo ku hubeesan biskoolado ayaa bilaabay in ay dadka kala degaan gaadiidka Dadweynaha ee loo yaqaab BL-ka, iyaga oo iska dhigaya ciidamo Nabad sugida ah oo baadi goobaya xubno Shabaab ah.
Burcadan hubeesan ayaana si gaar ah gaadiidka dadweynaha ugala dega dhalinyarada muuqaal ahaan ula muuqda kuwa dhaqan oo wata moobeelo qaali ah, waxa ayna kusii qaataan mooto bajaaj ay wataan burcada.
Kooxahan burcada ayaana dadka ay gaadiidka kala degaan mootadana ku qaataan ku dejiya xaafado cidlo ah oo dadku ku yaryihiin waxa ayna kasii qaataan moobeelada iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee xiligaasi wataan.
Shacabka magaalada Muqdisho oo markii hore dhibaato ku qabay burcada xaafadaha moobeelada uga dhax qaata ayaa hadana dareen cabsi leh waxaa kusii abuuray burcadan ciidanka iska dhigaya ee gaadiidka dadweynaha dadka kala degaya kadibna dhacaya.
Ciidamada amaanka ayaa ku guul dareestay kahortaga burcada hubeesan oo maalmahan sidoo kale bilaabay in ay dhac u geestaan mooto bajaajta sidoo kale dilaan dhalinyarada iska leh mootooyinkaasi ee isku dhajiya furayaasha mootada.
Previous articleDHAGEYSO: Sacuudiga Oo Xiriir Lasoo Sameysay Soomaaliya & Is Afgaradka
Next articleKheyre oo toosh ku daaray balan’laanta Farmaajo, gadaaalna ka riixaya doodaha ka socda baarlamaanka